Global Voices teny Malagasy » Maoritania avy amin’ny fijerin’ny artista portiogey iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Jolay 2018 5:12 GMT 1	 · Mpanoratra Ayesha Saldanha Nandika Naomy
Sokajy: Afrika Mainty, Maoritania, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Miaina ao Nouakchott, Maoritania, izay hanaovany hosodoko sy hamelomany toeram-pampirantiana zavakanto iray  ny artista Portiogey Isabel Fiadeiro (@Isabelfiadeiro ). Manao kisoritsoritra tantara an-tsary avy amin'ny zavatra hitany ihany koa i Fiadeiro, mameno ny bilaoginy Sketching in Mauritania  amin'ny sarin'ny fiainana andavanandro ao amin'ity firenena Afrikana Andrefana ity.
Tamin'ny novambra 2003, nanapa-kevitra ny handeha ho any Guinée-Bissau  amin'ny alalan'ny Renault 4L izaho sy ny namako Portiogey iray. Simba ny fiara tao amin'ny Valanjavaboarim-pirenena Banc d'Arguin  amin'ny moron-dranomasin'i Maoritania. Nijanona tao Nouakchott ny namako ary nandeha niaraka tamin'ny vondrona Frantsay hijery ny faritra Adrar  aho.
Nandritra ny taona maro aho nandeha tany amin'ny tanàna kely mitoka-monina iray mandritra ny iray volana, monina ao amin'ny fianakaviana iray ao an-toerana aho, nanao sary ny fiainan-dry zareo andavanandro. Nanao izany aho tamin'ny tanànan'ny mpanjono anankiroa tany Banc d'Arguin, sy tany Oualata, Goungel ary Ouadane ihany koa. Tany Tindouf, tany amin'ny tobin'ny mpialokaloka ao Sahara occidental  izay nandehanako hanao sarin'ny vehivavy sy ny asany any an-tsaha no nandehanako naharitra tamin'ny tanàna iray. Lasa namana ireny olona rehetra ireny, nifanoratra imailaka sy nifampiantso telefonina hatrany izahay ary misy ny fotoana tonga eto Nouakchott ry zareo.
Isaky ny zorontany ihany koa aho maheno voambolana vaovao, mifandraika amin'ny ranomasina na tany na biby, na amin'ny revolisiona .
GV: Mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera Urban Sketchers  ihany koa ianao. Azonao lazaina ve ny momba azy ireo?
IF: Fikambanana iraisampirenena tsy mitady tombombarotra ny Urban Sketchers, manoka-tena ho amin'ny fandrisihana hanao kisoritra sy sary hosodoko eo noho eo. Iray amin'ireo ifandraisana miisa 100  nasaina handray anjara avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao aho. Ny tanjonay dia ny handrisika olona hafa hanao kisoritra isan'andro, mba hanatsarany ny talentany sy ny fahaizany mijery.
Nandray anjara  tamin'ny symposiums maromaro an'ny Urban Sketchers aho. Hotontosaina any Barcelone ny manaraka . Manana solontena ifandraisana hafa izahay eto Maoritania amin'izao fotoana izao dia i Oumar Ball  izay nanomboka nanao sary tamin'izay hitany taona vitsivitsy lasa izay ary namoaka ny asany tao amin'ny Flickr . Amin'ity taona ity aho te-hanao valandresaka sy atrikasa maro aho handrisihana ny olona hafa ao Maoritania hanao sary izay hitany. Nanomboka namoaka ny sary nataoko ny Citymag , gazetiboky maimaimpoana zaraina isam-bolana ao Nouakchott. Angamba hanosika ny olona handray pensilihazo na penina izany ka hanombohany hanao sary.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/12/122727/
 toeram-pampirantiana zavakanto iray: http://www.zeinart.com/